China Carbopol 990 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Igama: ICarbomer990 ICarbopol990
ICarbomer 990 I-Carbopol 990 yipolyacrylate Polymer enqamleza umnqamlezo, ipolishwe kwinkqubo yokudibanisa i-ethyl acetate kunye necyclohexane. Iyakwazi ukubonelela nge-viscosity ephezulu, ukuqina okugqwesileyo kunye nokumisa ukusebenza ngedosi ephantsi. Ukuhamba kwayo okufutshane (ukungasebenzisi-drip) iipropathi kufanelekile kwizicelo ezinje ngeegel ezicacileyo, iigels ezinotywala, iikhrimu. Xa ingathathi hlangothi ngealkali yenza amanzi aqaqambileyo okanye iigels ezinotywala kunye neekhrim. ICarbomer990 yi-acrylic polymer enqamlezileyo ene-ethyl acetate kunye necyclohexane njengezinyibilikisi. Isetyenziswa njengesihlengahlengisi esisebenzayo se-rheological, esinokubonelela nge-viscosity ephezulu kumthamo ophantsi kwaye inezinto ezintle zokuqina kunye nokumiswa. Isetyenziswa ngokubanzi njengearhente yokumiswa ye-O / W emulsion kunye nekhrim. I-gel ecacileyo nebala yenziwa ngokunciphisa isisombululo samanzi ngealkali. Ine-viscosity ephezulu kune-carbomer 980.
Iinwele zokuthambisa iinwele kunye neegel
Ukusasaza iCarbomer990 ngokupheleleyo, kufanele icothiswe kancinci kwaye ngononophelo ukusasazwa phakathi ngelixa umxube unyanzeliswa ngokukhawuleza ukunqanda ukwenziwa kwamaqhuma; Umxhubi wezinga eliphezulu kakhulu lokucheba kufuneka aqeshwe ngononophelo ukuthintela ukulahleka kwe-viscosity.
Indlela yokupakisha: 20kg ibhokisi
Egqithileyo ICarbopol 981
Okulandelayo: ICarbopol 996